Goorma ayaa shaqada la iga eryi karaa? “Shaqeynta ikhtiyaarka ah” | LawHelp Minnesota
Goorma ayaa shaqada la iga eryi karaa? “Shaqeynta ikhtiyaarka ah”
Goorma ayaa shaqada la iga eryi karaa? “Shaqeynta ikhtiyaarka ah”310.11 KB
Qolada shaqadu markii ay rabaan ayey shaqada kaaga eryi karaan sabab kasta adiguna markii aad rabto ayaad shaqada iskaa uga tagi kartaa. Arrintan waxaa k la yiraa “Shaqeynta Ikhtiyaarka ah.” Cid laga reebaa ma jirto xeerka ikhtiyaar shaqada ah.
Waa sharci darro in qolo shaqadu shaqada kaaga eryaan arrimo ku salaysan dad kala soocid sharci darro ah. Waa dad kala soocid sharci darro ah kolka qolo shaqo bixisaa ay shaqada kaaga erido iyadoo sababtu tahay arrimo ku salaysan:
Lab ama Dhadig
La Galmoodka Raga/ dumarka
Qoomiyada loo dhashay
Jinsiyada la yahay (laakiin waxa ay ku waydiisan karaan sharcigaaga deganaanshaha wadanka)
Ka eeg waraqada war-gelinta ee Dad kala sooca iyo Khashkhashaadaha Shaqada ka dhaca.
Xaquuqda Qandaraasku uu u leeyahay Shaqada
Hadii aad haysato qandaraas shaqo, qolo shaqadu ma aha in ay ku erido hadii aadan jabin qandaraaska. Qandaraaska waxa uu noqon karaa:
Balan qaad afka ah
Warqad shaqo ugu baaqid ah oo shaqada ka horeeysa
Heshiiska gorgortanka ah ee ururada shaqaalaha iyo qoladu shaqadu wada galaan
Xataa hadii aad haysato mid ka mid ah kuwa kor ku xusan, macnaheedu ma aha in qolada aad u shaqeysaa aysan abadan marna ku eryi karin. Inta badan, qandaraasyadu ama buugta gacantu waxa ay sheegaan waxyaabaha shaqada lagaaga eryi karo iyo talaabooyinka qolada shaqada khasabka ku ah inay qaado ka hor inta aysan ku eryin. La hadal qareen hadii aadan hubin xaquuqdaadu waxa ay tahay.
Hadii aad urur shaqaale ka tirsan tahay, waxa aad leedaahay qandaraas shaqo oo la yiraa heshiiska gorgortanka wadarta. Waana heshiis u dhaxeeya qolada shaqada iyo ururka shaqaalaha. Heshiiskaasi waxa uu fari karaa qolada shaqadu inay cadeeyaan ‘sabab xaq’ ah oo ay ku ciqaabi karaan ama ku eri karaan qofka shaqaalaha ah. Eeg qandaraaskaaga lana hadal wakiilka ururka shaqaalaha ee goobtaada shaqada hadii aad qabto su’aalo ah oo arrintan ah.
Ilaalinta “Runta soo sheegaha” iyo ka hor taga Aar-goosiga
Mar marka qaarkood, sharciga ayaa ku ilaalin kara hadii shaqo lagaaga eryo iyadoo sababtu tahay difaacid xaquuqdaada aad difaacday ama waxa aad diiday in aad jabiso sharciga adigoo shaqo ku jira. Ma aha in lagu ganaaxo ama laguugu hanjabo sameynta aad sameyso arrimaha caynkaa ah. Arrintan waxaa loogu yeeraa ilaainta “run soo sheegaha” iyo ka hor taga aar-goosiga. Sharcigu waa uu ku difaacayaa hadii:
Aad u soo sheegto ‘si daacadnimo ah” jabin la jabiyey sharci dowlada ama kan qolada shaqada. “Si daacadnimo ah waxaa laga wadaa in aad dhabtii rumeysan tahay in waxa aad soo sheegaysaa ay run yihiin ayna sharci darro yihiin. Laakiin hadii ay shaqadaadu tahay inaad soo sheegto sharci jabinaha, waxaa laga yaabaa in aadan sheegan karin xaqa dadka sharci jabinta soo sheega ay leeyihiin.
Aad u sheegato ashtakooto qolada shaqada ku saabsan xaquuqdaada. Qolada aad u shaqeysaa kuma eryo karto si ay kaaga aarsato (aar gudasho) waayo waxa aad difaacday xaquuqdaada. Waxaa laguu ogol yahay in aad sameyso arrimaha sida sheegashada in dad kala soocid lagu sameeyey ama aad codsatay in lagu caawiyo waayo waxaa tahay hooyo ilmo naas u dhigaysa ama qof naafo ah.
Ay hay’ad dowladu leedahay kaa codsatay in aad ka qayb gasho baaritaan ama dacwo
Aad diiday in aad ku sameyso wax sharci darro ah shaqada aadna u sheegtay taa shaqada
Sharciyada arintani waa adkaan karaan. Wac qareen ama la hadal Wasaarada Minnesota ee Shaqada iyo Warshadaha (651) 284-5005 ama 1-(800) 342-5354. Gal www.doli.state.mn.us/.
Maha in shaqada lagaaga eryo:
In lacag jeegaaga laga gooyo
In gargaarka ilmaha jeegaaga laga gooyo
Fasaxyada sharcigu ogol yahay waa loo qaadan karaa. Sida uurka ama fasaxa waalidka, xanuun adiga ku hela, ilmahaaga ama qaraabada kale, gacan qaadka qoyska dhexdiisa ah iyo fasaxyada kale. Khasab ma aha in lacagi kuu socoto. Hadii uu baahato fasaxan, kala hadal qolada shaqada si aad u aragto in aad qaadan karto fasaxyadaa.
Ka eeg waraqadayada war-gelinta ee:
Time off from Work: Birth, Adoption, School Events
Time off from Work: Illness or Death
Time off from Work: Family in the Military
Employment Rights: Victims of Violence and Harassment
Hadii aad shaqada lagaa eryo ama aad ka tagto iyadoo sababtu tahay mid ka mid ah kuwa kore oo dhacay awgeed, u sheeg qolada shaqada waxa dhacay iyo inaysan waxaasi sax ahayn. Hadii aysan waxba ka qaban dhibaatada, waxaad heli kartaa lacagta shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo. Ka eeg warqadayada war-gelinta shabakada ee Unemployment Benefits. Waxaa kaloo dhici karta in shaqadii lagugu celiyo ama aad dacawooto. Waco qareen qaabilsan shaqooyinka.